Olympic Protest on Fur Trade
အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ် ၂ ဆုရှင် အာမန်ဒါ ဘားဒ်က သူမရဲ့ ၀တ်လစ်စလစ်ရိုက်ထားတဲ့ ပိုစတာကို ပရိသတ်ရှေ့ ထုတ်ဖော်ပြပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိရိစ္ဆာန် သားရေ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ အာရုံပြုမိလာအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း ခေါင်းဆောင်ဟာ အိုလံပစ် အားကစားသမားများ တည်းခိုရာ အားကစားကျေးရွာရဲ့ တောင်ဖက် ၀င်ပေါက်ရှေ့မှာ သူမကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဟန်ပြ ရိုက်ထားတဲ့ ပိုစတာကို ရဲနဲ့ အာဏာပိုင်တွေ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကြားက မီဒီယာတွေကို ပြခဲ့တယ်။ People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) က စီစဉ်တဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို အစက သူတို့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်နားက သီးသန့် အခန်းငယ်လေးထဲမှာ ကျင်းပမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ တရုတ် အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေး အကြောင်းပြ ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အခုလို အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလိုက်ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းသမားတွေက မေးတဲ့ သူ့ပုံက လိင်ဆွဲဆောင်တဲ့ ပုံ ပိုဆန်မနေဘူးလားဆိုတော့ သူမက ကျမ အလုပ်ကို ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သွားနေကျပဲ အဲဒီကမှ နောက်ထပ်နည်းနည်း ပိုချွတ်လိုက်ရတာ ကျမအတွက် သိပ်ရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်တော့ ပါဘူး လို့ သူမက ပြန်ဖြေတယ်။ကျမ ပလေးဘွိုင်း မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့ပြီးပြီ။ ကျမ ကိုယ်ခန္ဓာ အလှအပနဲ့ ကျမကိုယ် ကျမ ဘာဆိုတာ ကျမသိတယ် လို့ ပြန်ဖြေသွားပါတယ်။ PETA ရဲ့ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုအရ တိရိစ္ဆာန်တွေကို ချက်ချင်း သေအောင် သတ်တာ မဟုတ်ဘဲ လှောင်အိမ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး မာကျောတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ သတ္တုချောင်းတွေနဲ့ ရိုက်နှက်ပြီး မသေမရှင်တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးမှ အသက် ရှိနေသေးတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကနေ သားရေကို ခွာယူတာ မျိုးတွေ တကယ် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
my web site: http://themostcake.Co.uk
My web page - pluft.google-scraps.us
My web site ... http://Www.Bikersowned.ca/blogs/19492/30608/prime-golfing-holiday-getaway-in
Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion
my web blog: http://elevtv.ro/index.php?do=/blog/122667/top-places-to-watch-the-world-cup-in-europe/
final section :) I handle such
my site - http://twooz.info/index.php?do=/blog/24114/walking-in-october-in-axarquia-andalucia-southern-spain
New Friend Finder For Burmese
Moving to Next Step..
Regarding to WIKIMYANMAR
Distinct Places in Arakan
Greenhouse & Greenhouse Effect
Flag on Signboard!
We went to the 'Telling Lies' set and saw howanew medium for storytelling gets made - [image: Twitter][image: Facebook] The language doesn't exist yet to describe (or even accurately categorize) what Sam Barlow is making. Which is probably w...
Five Star အဖွဲ့ နဲ့ Pinky Dress နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး - Pinky Dress နဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး By - MyanmarCelebrity “Aroma Wedding Center” ရဲ့ (၈) ကြိမ်မြောက် Aroma Fashion Show 2020 မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ေ...